Fanarenana sy fanitarana :: Mitohy ny asa fanamboaran-dalana eto Antananarivo • AoRaha
Fanarenana sy fanitarana Mitohy ny asa fanamboaran-dalana eto Antananarivo
Mampandre ny mpa­mpi­asa lalana ny avy eo ani­von’ ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany, ny Toeram-ponenana ary ny Asa vaventy fa mbola ao anatin’ny fanohizana ny fanarenana sy fikojakojana ireo lalana rehetra eto Antananarivo Renivohitra izy ireo, amin’izao fotoana izao. Isany ahitana izany fanamboaran-dalana izany ny eny amin’ny faritra Alarobia, manoloana ny lisea teknika mihazo ny Pullman Ivandry. Ny zoma ho avy izao no tombanana ho vita ny asa. Manomboka eo amin’ny fihodinan-dalana eo amin’ny lisea Frantsay kosa ny eny Ambatobe mitohy hatrany amin’ny Total Analamahitsy.
Marihina fa tsy misy ny fahatapahan-dalana amin’ ireo faritra ireo fa tanterahina manomboka amin’ny 08 ora alina ary mifarana amin’ny 05 ora maraina ny asa rehetra.
Tapaka kosa ny lalana mampitohy an’Andranonahoatra hatreo amin’ny tobin-tsolika Jovenna Ambonisoa noho ny fanamboarana tsy maintsy atao. Hisokatra ho an’ny fifamoivoizana anefa ny lalana, anio. Mihodina miditra eo amin’ny Sinpa taloha ny lalana miakatra an’Ambanilalana mivoaka eo Ambonisoa.
Mahakasika ireo fanamboaran-dalana eto an-dreni­vohitra sy ireo tetikasam-panjakana mahakasika ny lalana kosa, toy ny fizotran’ny asa eny amin’ ny lalana By Pass mivoaka Andranobevava, ireo lalana miisa telo mihazo eny Androhibe (Soamandrakizay) dia mitohy hatrany koa.
Fepetra fampihibohana Nameno tanàna ny mpitandro filaminana
Valanaretina eto Antananarivo Mihoapampana hatrany ny isan’ ireo mararin’ny Covid-19
Fepetra fisorohana Miato indray ny tsena isan-kerinandro eto an-drenivohitra
Raisin’ny Tanàna Voara ireo marary tsy manana soritr’aretina mampiahiahy
Tobim-pamokarana rano :: Mihemotra ny fahavitan’ny asa eny Amoronankona
Fiarovana ny fambolena :: Hamoraina ny fahazoam-baovao mikasika ny toetr’andro ho an’ireo mpamboly
Ady amin’ny covid-19 Mihiboka tanteraka Analamanga